बोलिभियन पहाडी नरिवल Parajubaea torallyi - Botanix – विरुवाहरुबारेको जर्नल
Botanix – विरुवाहरुबारेको जर्नल
गृहपृष्ठ संग्रह (अर्काइभ) खोजी सम्पर्क बिरूवाको तस्वीरशाला
बोलिभियन पहाडी नरिवल Parajubaea torallyi
बोलिभियन पहाडी नरिवलको बीउहरु
Parajubaea torallyi दक्षिण अमेरिकाको एउटा सुन्दर कडा ताडि हो। यो बोलिभिया, यसको उत्पत्ति स्थानभन्दा बाहिरका मालीहरुले कमै मात्र लगाउँछन् किनकी यसको बीउ ठूलो हुन्छ जसले गर्दा ढुवानी खर्च बढी पर्छ।
यो २७०० देखि ३४०० सम्मको उचाईंको सुख्खा र धुलोमा उम्रन्छ। त्यसकारण यो ताडि संसारकै सवैभन्दा बढी उचाईंमा पाइने ताडिको प्रजाति हो। यहाँको तापक्रम २० सेल्सियसभन्दा बढी विरलै मात्र हुन्छ। जुलाइ र अगस्ट अर्थात जाडो महिनामा यहाँको तापक्रम –७ डिग्रीसम्म पुग्छ र यहाँ बर्षको ५५० मिलिमिटर पानी पर्छ।
यसले खडेरी, ताप, चीसो, असिना र अन्य प्रतिकूल अवस्था सहन सक्छ। यूरोपमा ३ डिग्री सेल्सियस तापक्रमसम्म असिना पर्छ भने यो ताडिको प्रजाति –८ डिग्री सेल्सियमसम्म बाँच्नसक्छ। यो विरुवाको सवै पात झर्छ र वसन्तमा नयाँ पातहरु पलाउँछन्।
बोलिभियामा यो ताडि १४ मिटर अग्लोसम्म हुन्छ भने यसको काण्ड २५–३५ सेमीसम्म मोटो हुन्छ। ताडिहरु १०० बर्षभन्दा बढी समयसम्म बाँचेका छन्, ३० मिटरसम्मको उचाईं र ५० सेमीसम्म मोटो भएको छ। यसको शिर २० वटाजति पातबाट बनेको हुन्छ र ५ मिटरसम्म लामो हुन्छ। बोलिभियाभन्दा बाहिरका विरुवाहरु भने योभन्दा साना हुन्छन्।
प्राकृतिक क्षेत्रका आधारमा यी दुई फरक प्रकारका छन् जसले गर्दा यसको फलको आकारमा अन्तर हुन्छ। सानो फल भएका P. torallyi var. microcarpa र ठूलो फल भएका P. torallyi var. torallyi. हुन्। microcarpa हेर्दा खासै अन्तर नभएपनि यो ठूलो फलको श्रेणीमा पर्दैन तर लचकता र कडापनको आधारमा भने यो यसै श्रेणीमै पर्नुपर्थ्यो। यसको अंकुरण अनिश्चित हुन सक्छ। सही हेरचाह भएमा हो समशीतोष्ण वातावरणमा वा घमाइलो ठाउँमा पनि हुर्कन सक्छ। यसको खडेरी, ताप, चीसो, असिना वा अन्य प्रतिकूल अवस्थालाई सहन सक्ने क्षमताले गर्दा यो प्राकृतिक सुन्दरताको लागि समेत प्रयोग गरिन्छ।
Parajubaea torallyi चर्चित आलंकरिक विरुवा हो र यो प्राय पार्क वा सडकको किनारमा उम्रिन्छ। Parajubaea cocoides इक्वेडर र दक्षिणी कोलम्वियामा २५०० देखि ३००० मिटरसम्मको उचाईंमा उम्रन्छ जसमा चीसो सहन सक्ने क्षमता कम हुन्छ। यो Parajubaea torallyi सँग धेरै मिल्छ तापनि यसको प्राकृतिक उत्पत्तिको थलो थाहा नपाइए पनि Parajubaea torallyi पाइने ठाउँमा यो पाइन्छ।
यो जातको ताडि प्रजातिको सवैभन्दा सानो जात Parajubaea sunkha हो जुन १९९६ मा पत्ता लगाइएको थियो। यो जम्मा ८ मिटर अग्लो हुन्छ र बोलिभियाको अन्डियन उपत्यकामा पाइन्छ जहाँको उचाईं १७०० देखि २२०० मिटरसम्म हुन्छ। पछिल्लो बनस्पति अनुसन्धान नहुँदासम्म यसलाई Parajubaea torallyi भनिन्थ्यो। त्यसपछि मात्र यसलाई Parajubaea sunkha भनिएको हो।
Parajubaea torallyi का ताडिहरु सजिलै रोप्न सकिने खालका ताडि हुन्। यो उमार्ने सवैभन्दा उत्तम विधी भनेको बीउ हो। यसको बीउ उमार्नका लागि निकै धैर्यता भने चाहिन्छ। कुनै बीउ एक महिनामै टुसाउन शुरु गर्छन् भने कुनैलाई टुसाउन दुई बर्षसम्म लाग्न सक्छ। यो समशीतोष्ण ताडिको प्रजाति भएकाले यसलाई कम तापक्रममा राख्नु पर्छ। अन्य खालका ताडिलाई जस्तो बढी तापक्रममा यसलाई राख्दा त्यसले अंकुरण प्रक्रियामा प्रभाव पार्छ। बढी तापक्रमले सुख्खायामलाई इंगित गर्छ जुन अंकुरणका लागि प्रतिकूल रहन्छ।
रोप्नुभन्दा अगाडि बीउलाई २० डिग्री सेल्सियस तापक्रमको पानीमा ५ देखि ७ दिन राख्नुपर्छ। ठूला खालका बीउलाई दुई हप्तासम्म पानीमा भिजाउनुपर्छ। भिजाइएको पानी दिनदिनै परिवर्तन गर्नुपर्छ।
भिजाउनाले बीउको निस्त्रि्कय अवधी समाप्त गर्छ। बर्षा ऋतु यसको अंकुरणका लागि उत्कृष्ट मौसम हो। डोर्मेन्सीले बीउको विकासक्रम रोक्छ। भिजाएपछि बीउलाई भाँडो वा प्लाष्टिकको झोलामा रोप्नुपर्छ। यसरी रोप्दा बीउको आधा भाग माटोले पुरिएको हुनुपर्छ र यसलाई १० देखि २० डिग्री सेल्सियससम्मको तापक्रममा राख्नुपर्छ।
असल अंकुरणका लागि दिन (बढी) र रात (कम) को तापक्रमले प्रभाव पार्छ। एकपटक बीउहरु रोपिएपछि त्यसमा धेरै पानी राख्नुहुँदैन किनभने धेरै पानीले कलिला बीउलाई नष्ट गर्न सक्छन्। अन्य ताडिका प्रजाति र Parajubaea बीचको मुख्य फरक भनेको यसलाई कम तापक्रम अनि कम पानी चाहिन्छ।
रोपिसकेपछि हरेक तीन/चार सातामा बीउलाई परीक्षण गरिरहनुपर्छ र उमि्रएका बीउलाई छुट्टै भाँडामा राख्नुपर्छ। केही ताडि उत्पादकहरुले छ महिनासम्म नउमि्रने बीउका सम्वन्धमा यस्तो सल्लाह दिन्छन्: बीउमा पानी हाल्न छोड्नुहोस् र माटोलाई केही महिनासम्म सुख्खा रहन दिनुहोस्। बीउलाई माटोबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, त्यसलाई एक हप्ताजति पानीमा राख्नुहोस् र त्यसलाई फेरि रोप्नुहोस्।
यी बीउहरु अर्को छ महिनासम्म टुसाउन थाल्छन्। यदि त्यो अवधीसम्म पनि उमि्रएनन् भने उही पुरानो प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुहोस् र बाँकी सवै बीउहरु अर्को बर्षा ऋतुपछि टुसाउनेछन्।
बीउको अंकुरण दर शतप्रतिशत छ। यसका लागि पर्याप्त धैर्यता हुनु आवश्यक छ र ती नटुसाएका बीउका लागि एउटा सुख्खा याम वित्न दिनुहोस्।
ताडिको बेर्ना तयार हुँदा यो कडा हुन्छ। यसमा धेरै पानी हाल्नुहुँदैन। कलिलो ताडिलाई ठिक्क वातावरणमा राख्नुपर्छ (प्राकृतिक माहौलमा यी परिपक्व ताडिको छहारीमा बढ्दछन्) भने परिपक्व ताडिलाई घाम चाहिन्छ।
Parajubaea जोखिममा रहेका दक्षिण अमेरिकी ताडिमध्ये एक हो। यसको कारण प्राकृतिक बासस्थानको विध्वंस, कृषियोग्य जमिनको विस्तार, रुखफँडानी र डिंगाहरुको चरन हो। यी ताडिहरु सानो क्षेत्रमा मात्र छन् जसले गर्दा यो लोप हुने सम्भावना धेरै छ। यसको बीउको आकार ठूलो हुने भएकाले यसको विस्तार क्षमता पनि कम छ। नयाँ नयाँ क्षेत्रमा यो ताडिको विस्तारमा सघाउने जनावर Spectacled Bear (Tremarctos ornatus) हो जो मानव क्रियाकलापका कारण दुर्लभ हुँदै गइरहेको छ।
««« अघिल्लो लेख: चीसो सहने ताडि Rhapidophyllum hystrix (निडल पाम) अर्को लेख: कालिमान्टन आँप, कस्तुरी (Mangifera casturi) »»»
मंगलबार 6.10.2009 20:17 | प्रिन्ट गर्नुहोस् | ताडिहरु
KPR को बारेमा
KPR – मालीहरुको समूह मालीहरुको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। पूरै पढ्नुहोस्
विरुवाहरुको वृद्धिको बारेमा तपाईंको अनुभव बाँड्नुहोस्। विरुवा, त्यसको हेरचाह र बृद्धिको बारेमा लेख लेख्नुहोस् र आफ्नै भाषामा Botanix को जर्नलमा प्रकाशित गर्नुहोस्। विस्तृत जानकारीका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Copyright © KPR – मालीहरूको क्लब स्लोभाकिया 1998-2009 | RSS | बीउहरू र विरूवाहरू विक्रिमा | बिरूवाको तस्वीरशाला